အကောင်းဆုံးမဂ္ဂနီစီယမ် Taurate (334824-43-0) ထုတ်လုပ်သူ - Cofttek
Cofttek သည်တရုတ်နိုင်ငံတွင်အကောင်းဆုံး Magnesium Taurate အမှုန့်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံတွင် ၇၀၀ ကီလိုဂရမ်၏လစဉ်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်ဖြင့်ပြီးပြည့်စုံသောထုတ်လုပ်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် (ISO9001 & ISO14001) ရှိသည်။
မဂ္ဂနီစီယမ် Taurate (334824-43-0) Specifications
အမည်: မဂ္ဂနီစီယမ် Taurate
မော်လီကျူးအလေးချိန်: 272.6 g / mol
ပွိုင့်အရည်ပျော်: 300 °ခန့်
ဓာတုအမည်: Ethanesulfonic acid, 2-aMino-, MagnesiuM ဆား (၂: ၁)
နာမ်: မဂ္ဂနီစီယမ် Taurate၊ Ethanesulfonic acid, 2-aMino-, MagnesiuM ဆား (၂: ၁)
InChI Key ကို: YZURQOBSFRVSEB-UHFFFAOYSA-L ကို
ပျော်ဝင်: N / A
လျှောက်လွှာ: ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများ; ဆေးဝါး; ကျန်းမာရေး၊ အလှကုန်ပစ္စည်း
ဘာဖြစ်သလဲ မဂ္ဂနီစီယမ် Taurate (334824-43-0)?
မဂ္ဂနီစီယမ် Taurinate ဟုလည်းလူသိများသောမဂ္ဂနီစီယမ်တာရာရတ်သည်မဂ္ဂနီစီယမ်အောက်ဆိုဒ်နှင့် taurine တို့၏ဖွဲ့စည်းမှုနှင့်တုံ့ပြန်မှုဖြစ်သည်။ မဂ္ဂနီစီယမ်သည်လူသားများအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရာတစ်ခုဖြစ်ပြီး taurine သည်အမိုင်နိုအက်ဆစ်ဖြစ်ပြီး ဦး နှောက်နှင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်အရေးပါသည်။ မဂ္ဂနီစီယမ်တာရာရိတ်ဖြစ်စေရန်မဂ္ဂနီစီယမ်နှင့်တာရိန်းပေါင်းစပ်လိုက်သောအခါအကျိုးကျေးဇူးများသည်သိမြင်မှုစွမ်းရည်မြှင့်တင်ခြင်းနှင့်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါများ၊
မဂ္ဂနီစီယမ် Taurate (334824-43-0) အကျိုးခံစားခွင့်
မဂ္ဂနီစီယမ် taurine သည်မဂ္ဂနီစီယမ်နှင့် taurine တို့၏ရှုပ်ထွေးသောတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်လူ့ကျန်းမာရေးနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများတွင်များစွာအကျိုးပြုသည်။
မဂ္ဂနီစီယမ် taurine သည်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါကာကွယ်ခြင်းအတွက်အထူးအကျိုးရှိသည်။
မဂ္ဂနီစီယမ် taurine သည်ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ခြင်းကိုကာကွယ်ရန်လည်းကူညီနိုင်သည်။
မဂ္ဂနီစီယမ် taurine သည်ယေဘူယျအားဖြင့်သိမှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုနှင့်မှတ်ဥာဏ်ကိုတိုးတက်စေနိုင်သည်။
မဂ္ဂနီစီယမ်နှင့် taurine တို့သည်အင်ဆူလင်ကိုထိခိုက်လွယ်စေပြီးဆီးချိုရောဂါ၏ microvascular နှင့် macrovascular သက်ရောက်မှုများ၏အန္တရာယ်ကိုအနည်းဆုံးဖြစ်စေနိုင်သည်။
မဂ္ဂနီစီယမ်နှင့် taurine နှစ်မျိုးလုံးသည်သက်သာစေသောဆေးနှင့်အာရုံကြောဆဲလ်တစ်လျှောက်ရှိအာရုံကြောဆဲလ်များ၏စိတ်လှုပ်ရှားလွယ်မှုကိုတားဆီးသည်။
မာဂနီစီယမ် taurine ကိုတောင့်တင်းခြင်း / ချောင်းဆိုးခြင်း၊ amyotrophic lateral sclerosis နှင့် fibromyalgia စသည့်ရောဂါလက္ခဏာများသက်သာစေရန်အသုံးပြုနိုင်သည်။
မဂ္ဂနီစီယမ် taurine သည်အိပ်မပျော်ခြင်းနှင့်အထွေထွေစိုးရိမ်ပူပန်မှုများကိုတိုးတက်စေသည်
မဂ္ဂနီစီယမ် Taurate (334824-43-0) အသုံးပြုမှု?
Taurine သည်အရေးပါသောအမိုင်နိုအက်ဆစ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ခန္ဓာကိုယ်မှသည်းခြေကိုဖန်တီးရန်၊ အသည်းကို detoxify လုပ်ရန်နှင့်အစာခြေရန်အတွက်အသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်မဂ္ဂနီစီယမ်နှင့်အတူလုပ်ဆောင်ရန်အထူးလုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုရှိပြီး၎င်းကိုနေ့စဉ်ဖြည့်စွက်ခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးသောပေါင်းစပ်မှုဖြစ်စေသည်။
မဂ္ဂနီစီယမ် taurate တွင်အမိုင်နိုအက်ဆစ် taurine ပါရှိသည်။ သုတေသနအရသကြားဓာတ်နှင့်မဂ္ဂနီစီယမ်လုံလောက်စွာစားသုံးခြင်းသည်သွေးသကြားကိုထိန်းညှိရာတွင်အဓိကအခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်ကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။ ထို့ကြောင့်ဤအထူးပုံစံသည်ကျန်းမာသောသကြားဓာတ်ပမာဏကိုမြှင့်တင်နိုင်သည်။ မဂ္ဂနီစီယမ်နှင့် taurine တို့သည်လည်းသွေးပေါင်ချိန်ကိုကောင်းမွန်စေသည်။
မဂ္ဂနီစီယမ် Taurate (334824-43-0) လြှောကျလှာ
မဂ္ဂနီစီယမ်တာရာရိတ်ကိုမွေးကင်းစကလေးများ၊ စွမ်းအင်ခိုင်ခံ့သောအဖျော်ယမကာများနှင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစားအစာများတွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုကြသည်။ ထိုတွင် Taurine ၏ပေါင်းစပ်မှုသည်မလုံလောက်သဖြင့်သေဆုံးဖြည့်စွက်မှုလိုအပ်သည်။
မဂ္ဂနီစီယမ် Taurate အမှုန့် ရောင်းမည်(မဂ္ဂနီစီယမ် Taurate အမှုန့်အမြောက်အများကိုအဘယ်မှာဝယ်ယူရမည်)
ကျွန်ုပ်တို့သည်နှစ်ပေါင်းများစွာပရော်ဖက်ရှင်နယ်မဂ္ဂနီစီယမ် Taurate အမှုန့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူဖြစ်ပြီးကုန်ပစ္စည်းများကိုအပြိုင်အဆိုင်စျေးနှုန်းဖြင့်တင်ပို့ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်သည်အရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးဖြစ်ပြီး၊ ကမ္ဘာတစ် ၀ န်းစားသုံးမှုအတွက်လုံခြုံမှုရှိစေရန်သေချာစွာ၊ လွတ်လပ်သောစမ်းသပ်မှုများပြုလုပ်သည်။
 Shrivastava P ကို, Choudhary R ကို, Nirmalkar ဦး, Singh ကတစ် ဦး, Shree J ကို, Vishwakarma PK, Bodakhe SH ။ မဂ္ဂနီစီယမ် taurate သည်ကတ္တီပါဒိုက်ကလိုရိုက် - သွေးတိုးရောဂါ albino ကြွက်များအားသွေးပေါင်ချိန်နှင့်နှလုံးရောဂါဖြစ်မှုကိုတိုးတက်စေသည်။ J Tradit ဖြည့်စွက် Med ။ 2018 ဇွန် 2;9(2): 119-123 ။ Doi: 10.1016 / j.jtcme.2017.06.010 ။ eCollection 2019 Apr. PMID: 30963046.PMCID: PMC6435948
 Choudhary R ကို, Bodakhe SH ။ မဂ္ဂနီစီယမ် taurate သည် cataractogenesis အားတားဆီးထားသော lenticular oxidative ပျက်စီးမှုနှင့် kadmium chloride - သွေးဆောင်သွေးတိုးရောဂါစမ်းသပ်သည့်တိရိစ္ဆာန်များမှ ATPase function ကိုပြန်လည်ရရှိခြင်းမှကာကွယ်ပေးသည်။ Biomed Pharmacother ။ 2016 ဒီဇင်ဘာ; 84: 836-844 ။ Doi: 10.1016 / j.biopha.2016.10.012 ။ Epub 2016 အောက်တိုဘာ 8 PMID: 27728893 ။
 ဘို S, Pisu အီးနှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါကာကွယ်တားဆီးရေး, အင်ဆူလင် sensitivity ကိုနှင့်ဆီးချိုရောဂါမှာမဂ္ဂနီဆီယမ်၏အခန်းကဏ္.ကို။ Curr ထင်မြင်ချက် Lipidol ။ 2008; 19 (1): 50e56 ။
 Choudhary R ကို, Bodakhe SH ။ မဂ္ဂနီစီယမ် taurate သည် cataractogenesis အားတားဆီးထားသော lenticular oxidative ပျက်စီးမှုနှင့် kadmium chloride-သွေးဆောင်သွေးတိုးရောဂါစမ်းသပ်သည့်တိရိစ္ဆာန်များမှ ATPase function ကိုပြန်လည်ရရှိခြင်းမှကာကွယ်ပေးသည်။ Biomed Pharmacother, 2016; 84: 836e844 ။
 Agarwal R, Iezhitsa I, Awaludin NA, Ahmad Fisol NF, Bakar NS, Agarwal P, Abdul Rahman TH, Spasov A, Ozerov A, Mohamed Ahmed Salama MS, Mohd Ismail N (2013) ။ "မဂ္ဂနီစီယမ် taurate ၏သက်ရောက်မှုသည် galactose- သွေးဆောင်စမ်းသပ်မျက်စိအတွင်းတိမ်၏တိုးတက်ခြင်းနှင့်တိုးတက်မှုအပေါ် Vivo နှင့်စသည်တို့အကဲဖြတ်ခြင်း" ။ စမ်းသပ်မျက်လုံးသုတေသန။ 110: 35-43 ။ Doi: 10.1016 / j.exer.2013.02.011 ။ PMID 23428743. in vivo နှင့် in vitro လေ့လာမှုများက magnesium taurate ဖြင့်ကုသမှုသည် Galactose ကျွေးသောကြွက်များတွင်မျက်စိအတွင်းတိမ်၏စတင်ခြင်းနှင့်တိုးတက်မှုကိုနှောင့်နှေးစေကြောင်း Ca (2 +) / Mg (2+) အချိုးနှင့်မှန်ဘီလူး redox အခြေအနေကိုပြသခဲ့သည်။